Dhiiri Galinta Jimcada: Fadlan Faaskaaga/Masaartaada Afeyso Xili Walbo – Filimside.net
Dhiiri Galinta Jimcada: Fadlan Faaskaaga/Masaartaada Afeyso Xili Walbo
Waxaa jiray nin geedaha jaro kaasi oo shaqo ka helay meel uu keyn ah oo boqorka magaalada maamul ahaan hoos imaado waxaana ninkan shaqada adag uu qabanayo iyo dadaalkiisaba ka helay boqorkii deegaanka u talin jiray.
Ninkii geedaha jari jiray wuxuu hawsha ku bilaabay in 18-geed uu jaray bishiisa kowaad waana lala cajabay shaqada sida uu hagar la’aanta u qabanaayo iyo dadaalka dheeriga ah uu bixinaayo boqorkana wuu ku farxay hawsha dar darta ku dheehan ninka geedaha jaro qabanaayo.
Bishii xigtay ninkii geedaha jari jiray isla dadaalkii bisha hore ayuu bixiyay laakiin 15-geed ayuu jaray, sidoo kale bishii sedexaad isla juhdigii bishii kowaad ayuu bixiyay haddana 12-geed ayuu jaray!
Boqorkii ayaa soo booqday ninkii dadaalka badnaa laakiin geedo jarrowgiisa is dhimeen wuxuuna kala hadlay hawshiisa wax soo saar ahaan sida ay isku dhimeyso.
Ninkii geedaha jari jiray wuxuu boqorka u sharxay in dadaal u yareyn laakiin ay macquul tahay awoodiisa is dhintay ama uu ka yara duqoobay qabashada hawshan geeda jarista ah.
Balse boqorkii ayaa ninka geedaha jaro ku dhahay “Goormee kuugu dambeesay inaan faaskaaga ama masaartaada afeeysid?
Si la yaab leh ninkii wuxuu ku jawaa celiyay “Boqoroow sedex bil ka hor ayaa iigu dambeesay feeska aan geedaha ku jarro inaan afeeyo.
Boqorka ayaa ninkii u sheegay in cilad kale aysan heesanin balse kaliya laga rabo inuu faaskiisa afeesto haddii uu misaas sameeyana 18-geed ka badan jarri karo hoos u dhaca shaqadiisa qabsatayna ay tahay inuusan ka warqabin agabka uu hawsha ku qabsanaayo.
Xigmaha Sheekadan ku jirto: Waa arin wanaagsan in dadaal badan iyo waqti lagu bixiyo hawsha aad rabtid inaan ka miro dhalisid. Laakiin waxaa wanaagsan in noloshaada aad isku dheeli tirtid waqti shaqada sii waqtina reerkaaga ama qoyskaaga sii sidoo kalena waqti usoo reebo inaad ku nasatid.
Taasi waxay sababi doontaa wax soo saarkaaga shaqo inuu marwalbo sareeyo haddii aad isku dheeli tirtid hawlahaaga shaqo iyo noloshaada caadiga ah haddii aad hal dhinac u badatid yoolkaaga sida saxda ah uma gaari kartid.
F.G: Sheekadan qofkii macalin ah wuu adeegsan karaa si uu Ardaydiisa ugu dhiiri galiyo waayo Ardayda mustaqbalka leh siweyn ayay u caawineysaa fahan ahaan.
Waxaa Aqrisay 302